Factory madio kokoa | Mpanamboatra mpanadio China, mpamatsy
Ny fako lafo vidy dia afaka miaraka amina pedal LJ-1676
Minion hook (2pk) CH-6582
LONGSTAR Minions hook hook, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Izy io miaraka amina entana mavesatra, afaka mavesatra 2.0kg; Rehefa mampiasa dia azafady mba ampio diovina aloha ny rindrina ary apetaho rehefa maina, avy eo esory ny sarimihetsika adhesive ao ambadiky ny farango ary apetaho amin'ny rindrina fa tsara, tsara kokoa ny mihantona aorian'ny 12ora, mety ho bebe kokoa maharitra ； Ary tsy tantera-drano koa izy io, azafady aza misalasala mampiasa azy; Ary miaraka amin'ny lamina mpanompo, dia toa velona sy mahafinaritra izy io.
Sasa fanasana minitra CH-6366
LONGSTAR Minions fanasana, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika, koa mety hifandray amin'ny sakafo. Malalaka ny sisiny, mampahazo aina azy ny mampiasa azy. Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Ny fitoeram-pako dia afaka mampiasa pedal 2.5L (S) LJ-1632
Boaty savony minions CH-6336
Boaty savony LONGSTAR Minions, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika. Miaraka amin'ny famolavolana dabilio roa, ary misy lavaka mikoriana eo ambaniny, manakana ny savony tsy hilentika; Amin'ny faritra malama izy io, mahatsiaro ho mahazo aina, mora koa ny manadio azy; Azo ampiasaina ao an-dakozia koa izy io, azo ampiasaina ho fitahirizana lakozia. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Fako oval afaka LJ-1647
LONGSTAR fitoeram-pako, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Mora ny mampiasa azy, apetraho fotsiny amin'ny fitoeran'ny fitoeram-pako ny kitapo fako dia tsara; Miaraka amin'ity fitoeram-pako faran'izay kely sy kanto ity dia tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro.
Sasa fanasana minitra (S) CH-6352
LONGSTAR Minions fanasana, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika, koa mety hifandray amin'ny sakafo. Miaraka amin'ny sisiny malama izy, mahazo aina ny mampiasa azy; Ary koa miaraka amina famolavolana tsy misy slip, mety kokoa ny mitazona azy; Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Miaraka amin'ny O fako afaka miaraka amina pedal 5L LJ-1633
Boaty savony minions CH-6392
Boaty savony LONGSTAR Minions, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika. Miaraka amina lavaka fivoahana any ambany, manakana ny savony tsy hilentika; Miaraka amin'ny famolavolana sarom-baravarana ihany koa, mora ny mitondra rehefa mandeha; Amin'ny faritra malama izy io, mahatsiaro ho mahazo aina, mora koa ny manadio azy; Azo ampiasaina ao an-dakozia koa izy io, azo ampiasaina ho fitahirizana lakozia. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Fako efa-joro dia afaka LJ-1648
Sasa fanasana minitra (L) CH-6353
Miaraka amina fako D afaka miaraka amina pedal 9.5L LJ-1635